प्रदेश नंं. २ मा हुने स्थानीय तह चुनावको लागि उत्साहजनक रुपमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदै – Dhukdhuki fm
in सर्लाही बिशेष — by admin —	September 6, 2017
सर्लाही, भाद्र २१ – आउँदो असोज २ गते प्रदेश नंं. २ मा हुने स्थानीय तह चुनावको लागि उत्साहजनक रुपमा उम्मेदवारी दर्ता भईरहेको छ । यसअघिको दुई चरणको चुनाव बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल समेत सहभागी भएपछि मतदातामा उत्साह छाएको छ ।
बिहान १० बजेदेखि आठ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुमा उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराउन फाराम लिने तथा दर्ता गर्नेहरुको घुईंचो लागेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्य शान्तिपूर्णरुपमा भैरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सर्लाहीमा ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी २० स्थानीय तह छन् ।
अहिले उम्मेदवारि दर्ता गराउने स्थल आसपास तथा पार्टि कार्यालय र वडा कार्यालयहरुमा बिभिन्न झण्डाहरु टाँगिएकाके छ भने लालबन्दी, हरिवन लगाएतका ठाउँहरु बेहुली झैँ सिँगारिएका छन । लालबन्दि नगरको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारि अनुसार अहिले माओवादिका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भईरहेको छ भने एमालेका उम्मेदवारहरु लाईनमा बसिरहेका छन ।
एमाले पछि कांग्रेसका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता गरिने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लालबन्दी नगरले जनाएको छ भने अन्य दलको पनि उम्मेदवार मनोनयन उत्साहपुर्ण तरिकाले भईरहेको छ ।
त्यस्तै असोज २ गत्ते हुने निर्वाचनका लागी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन । हालसम्म ४५ जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारि दर्ता भईसकेको लालबन्दी नगर निर्वाचन अधिकृत बाबुराम अधिकारिले जानकारि दिनुभएको छ । अझै मनोनयन दर्ता गराउने समय बाँकि रहेकाले मनोनयन दर्ता गराउने उम्मेदवारको संख्या बढ्न सक्ने बताईएको छ ।
उता हरिवन नगरमा पनि उत्साहपुर्ण तरिकाले मनोनयन दर्ता भईरहेको र स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या सबै दलबाट गरि २५३० जना जति रहेको निर्वाचन कार्यालय हरिवनले जनाएको छ ।
उता उम्मेदवार छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सिरहा कांग्रेसमा कुटाकुट भएको छ । सिरहा नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार कांग्रेस कोषाअध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरो डा. सुभाषचन्द्र यादवलाई दिएपछि असन्तुष्ट उपेन्द्र यादव पक्षबिच कुटाकुट भएको हो । दुई पक्षको हानाहानमा १० जना घाइते भएका छन् ।